Jurgen Klopp oo fasaxaya xiddigo dhowr ah isagoo la soo wareegaya kuwa cusub…..(Yaa ka mid ah???) – Gool FM
Jurgen Klopp oo fasaxaya xiddigo dhowr ah isagoo la soo wareegaya kuwa cusub…..(Yaa ka mid ah???)
Byare March 12, 2017
(England) 12 Mar 2017. Liverpool ayaa la warinayaa inay adduun dhan 150-milyan oo bound u gacan galisay tababaraheeda Jurgen Klopp si uu suuqa ugu galo xagaaga cusub.
Klopp ayaa jabiyay rikoodhka suuqa kala iibsiga ee Liverpool xagaagii la soo dhaafay markii uu la soo wareegay Sadio Mane, balse waxay iminka u muuqataa inuu midaa ka sii sara mari doono.
Tababaraha reer Germany ayaa go’aansaday inuusan la soo wareegin wax ciyaartooy ah suuqii Janaayo balse taageero badan ayuu iminka ka helayaa maamulka kooxda si uu xagagaaga xiddigo xul ah ula soo wareego.
Sida ay sheeganeyso jariiradda The Sun, Liverpool ayaa bartilmaameedsaneysa ciyaartooy sar sare kuwaa uu Klopp aaminsan yahay inay Premier League ku dagaalami karaan kal ciyaareedka soo socda.
Xiddigaha bartilmaameedka u ah Reds ayaa waxaa ka mid ah xiddiga Athletic Bilbao Inaki Williams, midka qadka dhexe kaga ciyaara Monaco Tiemoue Bakayoko iyo labada laacib ee ka ciyaarta Premier League ee Alex Oxlade-Chamberlain iyo daafaca Southampton Virgil van Dijk.
The Sun ayaa intaa ku dareysa in Klopp uu albaabka u tilmaami doono Daniel Sturridge, Lucas Leiva, Alberto Moreno, Adam Bogdan iyo midkood goolhayayaasha Simon Mignolet ama Loris Karius.
HORDHAC: Inter Vs. Atalanta
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Arsenal guusha wayn ka gaartay Lincoln City ee FA Cup